Obi Newtọ Afọ Ọhụrụ ... Ikekwe | Martech Zone
Sunday, December 31, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
N’ehihie a, mụ na ụfọdụ ezigbo ndị enyi m, Bill na Carla, na-eme Ememe Afọ Ọhụrụ. Anyị ga-egwu ụfọdụ Cranium egwuregwu, lelee vidio ụfọdụ, ma zuru ike ka anyị na-eche ka 2007 bịa nwayọ na (olile anya) n'udo.
MGBE: Edere m na mbụ banyere mmekọrịta azụmahịa siri ike m banyere na blogger ọzọ. N'arịrịọ nke ndị ọzọ na-agụ akwụkwọ, aga m edebe ọkwa a ele mmadụ anya n'ihu. Obi dị anyị ụtọ, anyị na-arụ ọrụ site n'okwu ndị pụtara ìhè.
Ihe isi ike nka na ụzụ, biko kwụrụ
Jenụwarị 2, 2007 na 9:03 PM
Obi dị m ụtọ na a na-arụ ọrụ a. Ahụrụ m ọkwa mbụ, ma enwere m nchegbu banyere gị. Ebe ọ bụ na m na-eru uju ọnwụ nwunye m na nso nso a (anyị kewapụrụ mana ezigbo ndị enyi) Enwere m ike ịkọwa na Ezumike Bad.
Nke m nwekwara ihe obi uto. Ọ hụrụ Christmas n'anya, mana ahụike ya egbochila ya "ịme ya nke ọma" n'ime afọ ole na ole gara aga. Ana m enweta nkasi obi n’ịmara na ọ nwere Christmas kachasị mma.